यो कठिन परिस्थितीमा मुटुरोगीले के गर्ने ? मुटुरोग विशेषज्ञको सुझाव
कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण अस्पतालका ओपिडी सेवा बन्द छन् । अस्पतालमा सहजै भाइरस फैलन सक्ने संभावना भएकाले अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्र अस्पताल जानु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो समयमा अन्य रोगका बिरामीलाई भने अन्योलमा परिरहेका हुन सक्छन् । यस्तो बेला औषधि सकिएर फलोअपमा बोलाइएका बिरामीले थप औषधि १–२ महिनासम्म नछुटाई खाएमा फरक नपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । कतिपय चिकित्सकले ‘वर्क फ्रम होम’ को अवधारणा अनुरूप घरबाटै फोन तथा इन्टरनेटमार्फत उपचार परामर्श दिइरहेका पनि छन् ।
अस्पतालहरूले पनि हटलाइनमार्फत पनि परामर्श दिइरहेका छन् । उनीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहँदा दुविधा कम हुन्छ । यसका साथै अहिलेको विषम परिस्थितिमा विभिन्न दीर्घ रोग लागेका बिरामीले घरमै कसरी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने भन्ने विषयमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञसँग कुराकानी गरी तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गरिएको छस्
मुटुरोगीले के गर्ने ?
ओमूर्ति अनिल, मुटुरोग विशेषज्ञ ओमूर्ति अनिल / ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल​​​​​​​
मुटुरोगीको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । विभिन्न अध्ययनका अनुसार मुटुका बिरामीलाई कोरोना संक्रमणको सम्भावना अधिक रहन्छ । संक्रमण जटिलता पनि बढी नै हुन्छ । तर, यसको अर्थ सबै मुटुरोगीलाई कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्छ भन्ने होइन । कोरोना भाइरसले संक्रमण गर्दा फोक्सोमा समस्या हुन्छ । यसले मुटुरोगीलाई झन अप्ठ्यारो पार्छ । सामान्य मानिसको तुलनामा मुटुरोगीलाई कोरोना लागेमा प्रतिरोध गर्न गाह्रो हुन्छ भन्न खोजिएको छ । त्यसैले मुटुरोगील संयमित भएर घरमै बस्नु उपयुक्त हुन्छ ।
मुटुरोगीले अलिक बढी सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ । तोकिएको औषधिको निरन्तरता त आवश्यक छँदैछ, कतिपय बिरामीको फलोअपको समय भएको हुनसक्छ । छोटो समयको औषधि प्रेस्क्रिप्सनमा यति समयमात्र प्रयोग गर्नु भनेर उल्लेख हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिलेकै औषधिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
रक्तचाप र कोलस्टेरोलका औषधि पनि नियमित रुपमा खाएमा फरक पर्दैन । समय–समयमा रक्तचाप तथा मधुमेह जाँच गराउनुपर्छ । धेरै चिल्लो तथा मसालेदारभन्दा पनि सामान्य खाना खानुपर्छ । मुटुरोगीले घरको वरिपरि वा छतमा हिँड्डुल गर्नुपर्छ । वृद्ध अवस्थाका मुटुरोगीलाई तलमाथि हिँड्न असजिलो भए छतमा हिँड्न सकिन्छ । अहिले त्रासका कारण स्यास्या हुने, मुटु ढुकढुक हुने, रक्तचाप थपघट भए, रिंगटा लाग्ने भएमा चिकित्सकसँग फोनबाटै सम्पर्क गर्न सकिन्छ । साथै उमेर पुगेका मानिसमा धेरै नै छाती दुखे, चिटचिट पसिना आए, मुटुको धड्कन अप–डाउन भए, अचानक स्यास्या भएमा भने तत्काल अस्पताल जानुपर्छ ।